Qaabka ubaxa ubaxa ee xannibaya iftiinka polyester 8329 daabacaadda, Shiinaha Lilac ubaxa ubaxa xayiraya iftiinka polyester 8329 daabac sheer soosaarayaasha, shirkado, warshad - Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
Naqshad GORGEOUS - Dhammaan daabacaadda saamaynta biyo-biyoodku waxay qaadataa qaabkeeda ubaxa. Daabacaaddan ubaxa ahi waa dariiqa dabka la hubo ee lagu noolaan karo qol kasta, laguna dejiyo ruuxyada hadiyaddan ka timaadda hooyada. , ka dhig ubaxyo ubax eeg, taas oo ku dareysa qoto dheerka booska sidoo kale xariir jilicsan oo jilicsan oo jilicsan oo jilicsan ayaa u ogolaanaya iftiinka dabiiciga ah, laakiin wali wuxuu xoojiyaa asturnaanta qaar. Qurxinta ugu fiican ee qolka fadhiga, qolka jiifka, qolka cuntada, iyo meel kasta oo gudaha ah oo guriga ah.
tayada-sare iyo adeegga macaamiisha weyn. Wax soo saarkeenu wuxuu la yimaadaa tayada ugu sareysa oo leh 100% qanacsanaanta macaamilka. Daabacaaddan ubaxa ah waa taabashada ugu fiican ee meel kasta oo casri ah, ugu yar, ama magaalo ah. Daabacaadda bey'ada-saaxiibtinimada iyo qalabka farshaxanka si loo hubiyo qaabab cad iyo cimri dherer waara.